Fivavahana & Spirituality Ny Baiboly
Diniho izay lazain'ny Baiboly momba ny maha zava-dehibe ny fifandraisan'ny mpianakavy
Rehefa noforonin'Andriamanitra ny olombelona, ​​dia namolavola antsika hiaina fianakaviana izy. Asehon'ny Baiboly fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fifandraisan'ny mpianakavy. Ny fiangonana , ny vatana mpino rehetra, dia antsoina hoe fianakavian'Andriamanitra. Rehefa mandray ny Fanahin'Andriamanitra amin'ny famonjena isika, dia raisina ho anisan'ny fianakaviany. Ny andian-dahatsoratra ao amin'ny Baiboly momba ny fianakaviana dia hanampy anao hifantoka amin'ny lafiny samihafa amin'ny fifandraisana amin'ny fianakaviana iray araka an'Andriamanitra.
25 Ny andinin-teny fototra momba ny fianakaviana
Ao amin'ireto andalan-tsoratra manaraka ireto, Andriamanitra dia namorona ny fianakaviana voalohany tamin'ny fananganana ny fampakaram-bady mandritra ny fanambadiana teo amin'i Adama sy i Eva .
Mianatra avy amin'io tantara io isika ao amin'ny Genesisy fa ny fanambadiana dia ny hevitr'Andriamanitra, noforonin'ny Mpahary sy noforoniny.
Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany ireo. (Genesisy 2:24 )
Ankizy, Hajao ny Rainao sy Reny
Ny fahadimy amin'ny Didy Folo dia miantso ny ankizy hanome voninahitra ny rainy sy ny reniny amin'ny fanajana azy ireo amin'ny fanajana sy fankatoavana. Izany no didy voalohany izay mitondra fampanantenana. Io baiko io dia nanasongadina ary matetika averimberina ao amin'ny Baiboly, ary mihatra amin'ny ankizy lehibe koa izany:
"Manajà ny rainao sy ny reninao mba ho ela velona ianao eo amin'ilay tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao." (Eksodosy 20:12, DIEM )
Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana; Fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana. Anaka, mihainoa ny ana-drainao, Ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao; Fiarovan-tena izy ireo mba hanasoavana ny lohanao sy ny rojo hanongotra ny tendanao. (Ohabolana 1: 7-9, NIV)
Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy; Fa ny adala manao tsinontsinona an-dreniny. (Ohabolana 15:20)
Anaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny Tompo, fa marina izany. "Hajao ny rainao sy ny reninao" (izany no didy voalohany misy fampanantenana) ... (Efesiana 6: 1-2, ESV)
Anaka, ankatoavy ny ray aman-dreninao, fa mankasitraka ny Tompo izany. (Kolosiana 3:20, NLT)
Fanentanam-panahy ho an'ireo mpitarika ao amin'ny fianakaviana
Andriamanitra dia miantso ny mpanara-dia azy mba hanompo amim-pahatokiana, ary i Josoa dia namaritra ny dikan'ny hoe tsy hisy olona hino izany. Ny hoe manompo amim-pahatsoram-po dia midika hoe manompo azy amin-kitsim-po, amin'ny fanoloran-tena tsy miangatra. Nampanantena ny olona hitarika azy amin'ny alalan'ny ohatra i Josoa; Hanompo ny Tompo amim-pahatokiana izy ary hitarika ny fianakaviany hanao toy izany koa.
Ireo andininy manaraka dia manome fitaomam-panahy amin'ny loham-pianakaviana rehetra:
Fa raha tsy mety manompo an'i Jehovah hianareo anio, dia izahao izay hotompoinareo, ary aoka hiankohoka eo anatrehan'izay andriamani-kafa any amin'ny tany izay nalehany izy, na ny andriamanitry ny Amorita, izay monina eo an-tanànanao, ka moa hahazo miverina amiko va ianao? ary ny fianakaviako dia hanompo ny Tompo izahay. " (Josoa 24:15)
Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra Ao an-tranonao; Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva Manodidina ny latabatrao. Eny, izany no fitahiana ho an'ny olona matahotra ny Tompo. (Salamo 128: 3-4, DIEM)
Ary Krispo, mpanapaka ny synagoga, mbamin'ny ankohonany rehetra dia nino ny Tompo. Maro koa tany Korinto no nandre an'i Paoly , tonga mpino, ary natao batisa. (Asan'ny Apostoly 18: 8, DIEM)
Noho izany, ny loholona dia tsy maintsy ho lehilahy iray izay miaina eo ambonin'ny fahafaham-baraka. Tokony ho mahatoky amin'ny vadiny izy. Tsy maintsy mifehy tena izy, miaina amim-pahendrena, ary manana laza tsara. Tsy maintsy ankafiziny ny fananana vahiny ao an-tranony, ary tokony ho afaka hampianatra izy. Tsy tokony hisotro labozia izy na ho mahery setra. Tokony ho malemy fanahy, tsy miresaka, ary tsy tia vola. Tsy maintsy mitantana tsara ny fianakaviany izy, manana zanaka manaja sy mankatò azy. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? (1 Timoty 3: 2-5, NLT)
Fitahiana ho an'ny taranaka
Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia maharitra mandrakizay ho an'izay matahotra azy ary mankatò ny didiny. Ny famindram-pony dia hikoriana amin'ny taranaka nifandimby:
Fa ny fitiavan'i Jehovah no fiandrianana mandrakizay, sy izay matahotra Azy ka mamadika ny fanekeny sy izay ananany ho an'ny zanany. Izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro hankatò ny didiny. (Salamo 103: 17-18, NIV)
Maty ny ratsy fanahy, nefa tsy manohitra; Fa ny momba ny tena fiandrasana no antery. (Ohabolana 12: 7, NLT)
Fianakaviana maro no noheverina ho fitahiana teo amin'ny Isiraely fahiny. Ity andalana ity dia mamela ny hevitra hoe manome fiarovana sy fiarovana ho an'ny fianakaviana ny ankizy:
Fanomezana avy amin'ny Tompo ny ankizy; valisoa avy aminy izy ireo. Ny zaza teraka ho an'ny zatovo dia tahaka ny zana-tsipìka manelatrelatra. Akory ny hatsaran'ny tongotr'izay nipetrahanao! Tsy ho menatra izy raha mahita ny mpiampanga azy eo am-bavahady. (Salamo 127: 3-5, NLT)
Milaza ny Soratra Masina fa amin'ny farany, ireo izay mitondra olana amin'ny fianakaviany na tsy mikarakara ny fianakavian'izy ireo dia tsy handova afa-tsy fahafaham-baraka:
Izay mandatsaka ny ran'olona, ​​dia handova ny rivotra; Ary ny adala dia tonga mpanompon'ny hendry. (Ohabolana 11:29, NIV)
Ny olona tia volafotsy no mahafaly ny fianakaviany; fa izay mankahala kolikoly no ho velona. (Ohabolana 15:27, Prot.)
Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. (1 Timoty 5: 8, DIEM)
Sarobidy ho an'ny vadiny
Ny vehivavy tsara toetra - vehivavy manana tanjaka sy toetra - dia satroboninahitra ho an'ny vadiny. Ity satroboninahitra ity dia tandindon'ny fahefana, sata, na voninahitra. Etsy ankilany, ny vehivavy mamohehatra dia tsy manao na inona na inona afa-tsy ny hampalemy sy handrava ny vadiny:
Ny vadin'ny andriana no manapaka ny volony; Fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lò ao anatin'ny taolana. (Ohabolana 12: 4, NIV)
Ireo andininy ireo dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fampianarana ny ankizy ny fomba tokony hiainana:
Alamino ny zanakao eo amin'ny lalana tokony haleha, ary rehefa lehibe izy ireo, dia tsy hamela izany. (Ohabolana 22: 6, NLT)
Ry ray, aza mampahatezitra ny zanakareo amin'ny fomba hitondranao azy. Fa atolory azy ireo ny famaizana sy ny fampianarana avy amin'ny Tompo. (Efesiana 6: 4, NLT)
Tena ilaina ny fifandraisana amin'ny fianakaviana satria modely amin'ny fomba iainantsika sy mifandray amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Rehefa nandray ny Fanahin'Andriamanitra tamin'ny famonjena isika, dia nataon'Andriamanitra zanakalahy sy zanakavavintsika feno isika tamin'ny fananganana antsika ho ao amin'ny fianakaviany ara-panahy.
Nomena zo mitovy amin'ny zaza teraka ao amin'io fianakaviana io izahay. Izao no nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy:
"Ry rahalahy, taranak'i Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia efa nirahina ho amin'izao tontolo izao ny hafatry ny famonjena." (Asan'ny Apostoly 13:26)
Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray ô . (Romanina 8:15, ESV)
Feno alahelo mangidy ny foko ary manala ny alahelo ho an'ny vahoakako, ry rahalahiko sy anabaviko jiosy. Ho vonona ny ho voaozona mandrakizay-hiala amin'i Kristy! -fahasoavina izany. Izy ireo dia olon'ny Isiraely, nofinidy ho zanaka natsangan'Andriamanitra. Andriamanitra dia nanambara ny voninahiny tamin'izy ireo. Nanao fanekempihavanana tamin'izy ireo Izy ary nanome azy ireo ny lalàny. Nomen'izy ireo tombontsoa hivavaka aminy sy hahazo ny fampanantenany mahafinaritra. (Romana 9: 2-4, NLT)
Andriamanitra dia nanapa-kevitra mialoha mba hanangana antsika ao amin'ny fianakaviany manokana amin'ny alalan'ny fitondrana antsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy . Izany no tiany hatao, ary nahafinaritra azy izany. (Efesiana 1: 5, NLT)
Koa dia tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo. Olom-pirenena miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra masina rehetra ianareo. Mpikambana ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra ianao. (Efesiana 2:19, NLT)
Izany no antony andohalehako ny lohaliko eo anatrehan'ny Ray, izay nantsoin'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ... (Efesiana 3: 14-15, ESV)
Tantaram-pitiavana ny zanaka lahy - Lioka 15: 11-32
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fiarovana mandrakizay?
Fanozonana sy ozona: Inona no atao hoe ozona?
Drafitry ny famakiana Baiboly ho an'ny Fandikana nataon'i James McKeever
Teny fanolorana ny 1 sy 2 Tantara
Ny andininy ao amin'ny Baiboly amin'ny fialan-tsasatra
Topy ny Baiboly Software
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny habokana sy ny boka?
Horonan-tsary mampihorohoro tsara indrindra izay miala ny Oseana
Vakio ny Star Wars Way: Torolalana ho an'i Aurebesh
Fahatakarana ny tontolom-pianakaviana manokana sy ny vahoaka
5 Fahasalamana mahazatra eo amin'ny bodybuilding
Ny Fahafatesan'i Catherine Lehibe: Manala ny hadalan'ny soavaly
Dokotera Filipino Fe Del Mundo
5 Fitiavan'ilay Mpamorona Ny Fitiavana Lehibe
Peroa ho an'ny mpianatra Espaniola
Top 10 Top-Tenim-bala tena ratsy indrindra tamin'ireo '80 taona
Ny trano sarotra indrindra hiditra ao
Ny fiainana sy ny andron'i Ben E. King
Ahoana no handoavana ny saram-panambadiana na fanoloran-tena?
Torohevitra amin'ny fanoratana hevitra amin'ny fotoan-dehibe iray izay nitarika ho amin'ny fitomboan'ny tena manokana
Ny fitomboan'ny olan'ny fampielezan-kevitra